I-China yandise umzi-mveliso we-Metal kunye nabaxhasi | Dongjie
1.Itsimbi eyandisiweyo luhlobo lwentsimbi eshinyeneyo enqunyulweyo kwaye yolulwe ukwenza iphethini eqhelekileyo (ihlala idityaniswe ngedayimani). Ngenxa yendlela yayo yokuvelisa, isinyithi esandisiweyo sesinye sezona zixhobo zoqoqosho ezomeleleyo nezomeleleyo, okanye izixhobo zokwenza imarike. Isinyithi esandisiweyo senziwe kwiphepha lesinyithi eliqinileyo, kwaye alilukwanga okanye alungwanga. Ke ayinakuze yaphulwe. I-mesh eyandisiweyo yensimbi ibandakanya i-arhente eyandisiweyo yentsimbi, isihluzo sensimbi eyandisiweyo, i-BBQ eyandisiweyo yensimbi, i-micro eyandisiweyo yensimbi kunye ne-mesh yokwakha.
Isinyithi sesakhiwo esandisiweyo sisetyenziselwa ukuhombisa ulwakhiwo okanye izinto zokwakha, njengombhalo we-ceiling, ishedyuli ye-facade, indawo yokwahlula indawo, ishelufu, ishedyuli yefanitshala, ishedyuli yokwakha njl. Njl. Isinyithi esingenanto.
I-3.Filter eyandisiweyo yensimbi ngokubanzi isebenzisa i-galvanised iron njengezinto eluhlaza. Ewe ngokwesidingo somthengi, inokusebenzisa insimbi engenanto okanye iaruminiyam yentsimbi.
I-4.BBQ eyandisiweyo yintsimbi ihlala isebenzisa i-galvanized iron njengempahla eluhlaza, eneenzuzo zokulwa urhudo, anti-rust kunye noqoqosho.
I-5.Micro eyandisiweyo yensimbi yenziwa ikakhulu ngentsimbi yealuminiyam yentsimbi kunye nentsimbi yobhedu. Ukuba unezinye iimfuno, singazenzela ngokwakho.
I-mesh eyandisiweyo yensimbi isetyenziselwa ubukhulu becala ukuyila ngaphakathi nangaphakathi uyilo olufana nokuqiniswa kwesamente, ukugcinwa kwendlela ende, ibhulorho, ucingo locweyo lweendawo zemidlalo, ukhuseleko lwibhanti eluhlaza yendlela, njengeqonga lokusebenzela, umhambi, indlela kaloliwe, ushishino lokukhanya, ulwakhiwo Izixhobo, igadi, ishishini lezemigodi, ishishini le-petrochemical, uphahla oluhlanganisiweyo, iingcango kunye neewindows, amakhethini, ialarm, ukufikelela ngokukhawuleza, i-corplor stair baffle, iitafile kunye nezitulo, ii-vents zomoya, ibhokisi yokugcina izinto, amashalofu, umsebenzi wezandla.
Ikwanokusetyenziselwa isigqubuthelo se-grille mesh, isikhuselo sombhobho, ukukhuselwa kwezixhobo, i-10,000 yeenqanawa, iithayile zerhasi yeoyile, oomatshini abasebenza nzima, oomatshini bokuhambisa amanzi, umgodi weoyile, indawo ekuyiwa kuyo, ukwakhiwa kwenqanawa, amashishini amalahle, ezolawulo kwimikhosi yezolimo. Ukufuya emanzini, isixhobo sasekhaya njl njl. Ngokwezicelo zakho, sinokukucebisa ubungakanani obufanelekileyo bemilambo yensimbi eyandisiweyo.
Edlulileyo: Isihluzi seCarbon esebenzayo
I-Metal eyandisiweyo ye-Metal
Ukucoca i-Metal eyandisiweyo
I-Barbecue Wire Mesh
I-Metal eyandisiweyo yoLwakhiwo